Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Airbus dia miantso ny lohan'ny fiaramanidina miaramila vaovao
Nanendry an'i Alberto Gutiérrez, 56 taona, Lehiben'ny fiaramanidina miaramila ao anaty Airbus Defense and Space, Airbus SE, nanomboka ny 1 Janoary 2019. Hanao tatitra amin'ny Lehiben'ny mpanatanteraka (CEO) Airbus Defense Dirk Hoke izy ary ho lasa mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraky ny fizarana. Ankoatr'izay, i Alberto Gutiérrez dia ho Lehiben'ny Airbus Spain ihany koa, manara-maso ny asan'ny orinasa amin'ny ankapobeny ao amin'ny firenena. Nandimby an'i Fernando Alonso, 62 taona izy, izay hisotro ronono aorian'ny 40 taona amin'ny indostrian'ny aerospace, 37 ao amin'ny Airbus. Fernando Alonso dia hijanona hatramin'ny faran'ny volana martsa 2019 mba hiantohana ny fifandimbiasam-bola miaraka amin'izay handimby azy.
“Misaotra an'i Fernando aho noho ny fifandraisany miavaka sy ny fitarihana mitaona fanahy nandritra izay taona maro izay. Raha ny marina, izy dia iray amin'ireo mpitarika olona tsara indrindra hitako teo amin'ny indostrianay. Miverina mijery asa tsara i Fernando miaraka amin'ny zava-bita tsy tambo isaina. Tsy vitan'ny naha-fitaovana azy tamin'ny famerenana ny toe-java-misy A400M mitsivalana amin'ny fiaramanidina Miaramila tato anatin'ny taona vitsivitsy izy; izy koa dia nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ary nitondra ny fiaramanidin'ny Airbus Familiy Aircraft anay ho injenieran'ny sidina sidina. Miaraka amina ora fitsapana an'arivony an'arivony maro eo ambanin'ny fehikibony dia nanao ny sidina voalohany an'ny A340-200 izy tamin'ny 1992, ny A319 tamin'ny 1997, ny A380 tamin'ny volana aprily 2005 ary ny A350 XWB tamin'ny volana jona 2013. Mirary fisotroan-dronono mendrika azy aho ”, hoy ny talen'ny CEO Airbus Tom Enders.
Dirk Hoke, CEO an'ny Airbus Defense and Space, dia nilaza hoe: "Miaraka amin'i Alberto Gutiérrez, manana mpandimby an'i Fernando izahay izay mitondra fahalalana sy fahaizana be dia be amin'ny fiaramanidina Miaramila. Ny maha-akaiky azy ny raharaham-barotra dia fananana manandanja rehefa mijery ny fikarohana tombontsoa vaovao amin'ny raharaham-piarovana izahay manomboka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny sehatra efa misy toa ny Eurofighter na ny A330MRTT mankany amin'ireo tetikasa vaovao toa ny Future Combat Air System. Ny fifantohan-tsain'ny mpanjifa matanjaka ao Alberto miaraka amin'ny fahaizana momba ny programa sy ny injeniera, no nahatonga azy ho mpirotsaka hofidina hanohy ny fanatsarana sy ny fivelaranay amin'ny asan'ny fiaramanidina Miaramila amin'ny taona ho avy.
Alberto Gutiérrez, izay lefitra lefitra misahana ny fiaramanidina miaramila ao anatin'ny Airbus Defense and Space nanomboka ny volana Jolay 2017, no CEO an'ny Eurofighter GmbH monina any Alemana hatramin'ny 2013 ka hatramin'ny 2016.
Nanomboka ny asany tamin'ny 1985 tamin'ny naha injeniera azy izy ary nitana andraikitra ambony momba ny fitantanana zokiolona ao amin'ny Airbus Defense and Space amin'ny maha Head of Operations ho an'ny Airbus Military sy Head of Eurofighter Production ho an'i Alemana sy Espana. Manana mari-pahaizana injeniera momba ny fifandraisan-davitra avy amin'ny Universidad Politécnica any Madrid izy.